तपाई सपनामा सर्प देख्नुहुन्छ ? तपाईमा अब यी चकित हुने ६ कुराको लक्षण हो – Sandes Post
March 31, 2022 384
सपना कहिलेकाही विपनामा साकार हुन्छ । सपना कहिलेकाही संकेत लिएर आउँछ । आज हामी यो बारेमा खुलाउँदै छौ ।हामीले सपनामा के देख्न सक्ने कसैको नियन्त्रणमा छैन । सपना एउटा यस्तो सत्य हो जुन सबैका लागि सामान्य छ र हरेक व्यक्तिले जीवनमा कहिलेकाहीं सपना अवश्य देख्छ ।
आज हामी कुरा गर्दैछौं सर्पको सपनाको बारेमा ।हो, सपनामा सर्प देखेर डराउनु सामान्य छ । यसलाई लिएर हाम्रो समाजमा थुप्रै प्रकारका विश्वासहरू छन् ।धार्मिक ग्रंथहरूमा, सर्पको सपना लिएर धेरै कुराहरू भनिएको छ। आउँनुहोस जानौं सपना सँग सर्पको के सम्बन्ध हुन्छ ।
१, शारीरिक सम्बन्धको जीवन र सर्प यदि सपनामा सर्प तपाईंको ओछ्यानमा देखिन्छ वा सर्पसँग जोडिएको अन्य पुरात देख्नुभयो भने त्यसको सिधै असर तपाईंको शारीरिक सम्बन्ध ऊर्जासँग हुन्छ । साथै सपनामा सर्प देख्नाले तपाई आफ्नो शारीरिक सम्बन्धको साथीका बारेमा धेरै कुराहरु जान्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
२, सर्प र समृद्धि पुरानो समयमा, सर्पलाई सद्धृदिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको थिँयो । यस विश्वासको अनुसार, यदि तपाईंले आफ्नो सपनामा सर्प देख्नुभयो भने, तपाईंले चाँडै सफलता र पैसा पाउँदै हुनुहुन्छ । तपाईले थालेको काममा तपाई सफलताको नजिक हुनुहुनछ । यर्सथ तपाईंले सफलताको मार्गमा आउँने सबै बाधाहरु पार गर्नुभयो ।
३, सर्प र चेतावनी सपनामा सर्पको बारेमा अर्को धारणा यो हो कि तपाईंको वरिपरि कसैले त्यस्ता व्यक्ति छ, जसलाई तपाईले अत्याधिक मात्रामा विश्वास गर्नुहुँदैन । दोस्रो तथ्य के हो भने तपाईं कुनै पनि सत्यलाई बेवास्ता गरेर गलत मार्गमा अगाडि बढ्दै हुदैँन, यसलाई पनि जान्नुहोस्।
४, सर्प र आध्यात्मिकता पूर्वी देशहरूमा प्रचलित विश्वासका अनुसार, सपनामा सर्प आउँनु भनेको तपाईंको कुन्डलिनी जागृत हुनु हो । तपाईंको शरीरले नयाँ प्रकारको ऊर्जा पाउँदैछ, जसमा तपाईंले सफलताको मुकुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सपनामा सर्प हुनुको अर्थ आध्यात्मिक उपलब्धिहरु संग पनि जोडिएको छ।
५, सपनामा सर्पले क्षति पुर्याउनु यदि सपनामा तपाईलाई सर्पले क्षति पुर्यायो वा कोशिस गर्दैछ भने, यसको अर्थ हुन्छ तपाईंले कुनै पनि संघर्ष वा जीवनमा चलिरहेको परिस्थितिहरूलाई यथास्थितमा छोड्नु पर्छ । भविष्यमा यो स्थिति एक बोझ हुन सक्छ किनभने, यसको साथ बलियो रूपमा संलग्न हुनु तपाईको लागि बोझ भन्दा अरु केही हुँदैन ।
६, सर्प र मन पर्ने वा नपर्ने वातावरणको अनुसार तपाईं जहाँ बस्नुहुन्छ, सपनामा सर्प आउनुको अर्थ फरक हुन सक्छ। तर सर्पको बारेमा तपाईं कसरी सोच्नुहुन्छ ? चाहे तपाईं तिनीहरूसँग डराउनु हुन्छ वा हुँदैन, तपाईंको सपना पनि यस कुरामा निर्भर गर्दछ ।
किनकी यदि तपाईं सर्पदेखि डराउँनुहुन्छ भने, सपनामा सर्प देखेर तपाईंको अनुभव कुनै सर्प पालेर बसेको मानिसको भन्दा फरक हुन सक्छ । यो भनिएको छ, हामी अक्सर हाम्रो सपनाहरु मा त्यहि चीजहरू देख्छौं, जसको हामी वरिपरि छौं वा त्यसका बारेमा हामी अधिक सोच्न सक्छौं।
Prevपलको तर्फबाट लड्ने महिला वकिलको खुलासा, पललाई उच्चले धरौटीमा छोड्न सक्छ ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )
Nextबढ्यो सार्वजनिक बसको भाडा , कति बढ्यो हेर्नुहोस्
केशव स्थापित र बालेन शाहको जम्का भेट
टिकटक सेलिब्रेटी अंशु वर्मा राप्रपा प्रवेश, ज्ञानेन्द्र शाहीले गरे स्वागत
१२ सय तलबमा दुबई पुगेकी एक युवतीको एक वर्षमै ५५ सय दिराम पुग्यो कसरी ?